Xiisaha loo hayo in la xaliyo masalooyinka xisaabeed waxa uu weligeedba ahaa mid soo jireen ah. Bilowgii waxay masalooyinku ahaayeen kuwo fudud oo qaab hadal ahaan ah loo sharxi jirey. Laakiin markii ay masalooyinku noqdeen kuwa adag oo u baahan qaab xisaabeed ah, ayaa la arkay in aan qaabka hadalka lagu sharixi karin.
Giriiggii hore iyo Carabtuba waxay muddo ka dib ku guulaysteen iney jawaab u helaan masalooyinka ayaga oo adeegsan jiray xisaabta Joometeriga. Qaabkaas cusub ee masalooyinka lagu xalliyo oo looga shaqeeyo waxaa loo bixiyey aljebrada joometeriga.
Waqtigaa waxaa la adeegsaday jirey tirooyin iyo calaamado aad loo horumariyey. Aljebrada joometiriyada ayaa waxay suurto gal ka dhigtay xalinta masalooyinkii dhibka badnaa ee la xiriiray cilmiga dhismaha.
Waxaa ka dib lagu guulaystay in la soo dejiyo sharciyo lagu xalin karo masalooyin fara badan oo kala duwan. Markaa ayaa la bilaabay in la adeegsado xuruufaha, ayna noqdaan qeyb muhiim ah oo xisaabta ka mid ah, waxaana xuruufaha loo adeegsadaa qoritaanka sharciyada xisaabeed ama qaaciddooyinka. Waqtigaas oo ahayd qarnigii 16 naad markii aljebrada ay si aad ah u soo shaac baxday waxaa lagu magacaabay xisaab xuruufeed.
Aljebrada waxaa maanta ay tahay qeyb ka mid ah qeybaha ugu muhiimsan xisaabta iyada oo wax weyn ku kordhisay dhamaan laamaha kale ee xisaabta.